Sida loo Beddelaan MXF in DVD si fudud oo dhaqso
> Resource > DVD > Sida loo Beddelaan MXF in DVD
Sida dadka intooda badan, waxaa laga yaabaa inaad rabitaan ah in ay gubaan fiidiyo videos si aad u DVDs, si aad naftaada ku raaxaysan kartaa telefishin screen weyn, weligiis sii xasuusta macaan, ama la wadaagto dadka kale oo dheeraad ah ku haboon iwm Haddii aad fiidiyo laayey videos in MXF format, sida sida Panasonic HVX200 iyo Canon XF300, wax laga yaabaa in ay wax yar ka xeelad badan. Taasi waa sababtoo ah files MXF way adag yihiin si ay u isticmaalaan in codsiyada ugu badan. Haddii aadan hore u helay sida app weyn kuu ogolaanaya inaad si ay u gubaan MXF in DVD, waxaad isku dayi kartaa Wondershare DVD abuura .
Waxay si buuxda u taageersan qaab MXF, oo uu awood u leeyahay in Eebe idin ka footage videos MXF gubi DVD disc xirfadle-raadinta. Iyada oo taageero ka ay video editor anfacaya, waxaad si deg deg ah oo fudud u jari kara oo dhan clips cajiib ah ka videos galay DVD disc ah, xitaa kor loogu qaado videos si uu u sameeyo DVD ah persionalized. Sidoo kale, waxaa aad bixisaa badan marto DVD menu qabow xusho. In eray keliya, barnaamijkan dhigeysa in aan si sahlan si aad u gubi MXF videos in DVDs oo tayo sare leh.
Geedi socodka oo dhan waa sida ugu fudud ee 1-2-3. Just raac tilmaan-hoose si ay u bilaabaan mashruuca weyn.
1 dejinta MXF videos aad
Marka hore, xiriiriyaan fiidiyo ugu PC, ka dibna dhoofin files MXF si aad u computer. Hadda, ordo this MXF weyn oo ay ku DVD gubi, iyo bilaabaan in ay soo dhoofsadaan files MXF si aad u app this. Si tan loo sameeyo, waxaad leedahay sadex habab uu ka soo xusho,
Mouse ka dhaqaaq "+ Import" badhanka in this app ee Murayaad bidix, ka dibna u riix si aad ku darto files MXF deegaanka.
Waxaa jira button wareega buluug ah dhinaca kore ee bidix ee suuqa kala this. Kaliya waxaad u guji dooro "Add Files ..." fursad u dajiyaan videos.
Haddii kale, ka heli gal ah in ka kooban yahay files MXF aad, ka dibna dajiyaan faylasha aad rabto by jiitaa-iyo-dhibic.
Talooyin (Ikhtiyaar) :
1. Beddel xigxiga video ah, si ay videos ku daray in la diyaarin karaa si waafaqsan play ah. Si aad u samayn, in aad sidoo kale riix "↑" ama "↓" doorasho hoose ee suuqa kala ama jiita & hoos u file ah meeshii aad rabto.
2. Si aad u maamuli lahayd videos fiican, waxaad dooran kartaa in aad ku darto koob cusub oo ka badan adigoo gujinaya ah "Add horyaalka" button.
3. Hit ikhtiyaarka Edit mid ka mid ah baararka video item in ay jar, dalagga, shaandheyn videos, dalban saamaynta qabow kala duwan si ay videos ah, xitaa qabsato video dhalaalka / barbardhigo / saturation / mugga iwm
Tag suuqa kala Menu ah, guuraan slider dhinaca midig ilaa aad ka heshid aad jeceshahay template DVD menu. Markaas, kaliya waxa ay ku dhufo si aad u dalbato in mashruuca, ka dibna ku dar thumbnails, badhamada, qoraalka, background image, music soo jeeda iwm si ay u astaysto ah DVD menu gaar ah. (Fiiro gaar ah: Haddii aadan heli karin template ah DVD menu qanacsan in app this, kaliya aad riix cagaaran hoos arrow icon si ay u soo bixi arrimo DVD menu dheeraad ah oo lacag la'aan ah online.)
Ka dib markii in, furo "Kulanka Xiisaha Leh" suuqa kala adigoo riixaya "Kulanka Xiisaha Leh" tab. Halkan, waxaad ka arki kartaa saamaynta finial. Haddii aad rabto in aad beddesho wax, kaliya ku noqo mar kale sameeyo.
3 Beddelaan MXF in DVD
Ka dib marka aad is geliso DVD5 maran ama disc DVD9, kaliya aad ku dhufatey "Guba" tab sare ee suuqa kala si sax ah "Guba si disc" doorasho iyo waxaa ku dhacday "Guba" button. Markiiba, app this bilaabi doonaan inay disc DVD gubanaysa files MXF aad (Fiiro gaar ah: Haddii app this aan lacag, ku gubi doonaa DVDs la watermark ah.) A halka ka dib, waxaad heli doontaa DVD disc ah playable. Just leedahay maad ah!
Fiiro gaar ah: App Tani waxay cadaadin doonaan inay ku haboon ee aad DVD disck haddii tirada file saarka uu yahay mid aad u weyn.
Sida loo qaab DVD ah
Sida loo Guba VLC Videos in DVDs